China L-Theanine fanamboarana sy orinasa | Mingxing
Anarana anglisy: L-Theanine
Milanja molekular: 174.2
Ny L-theanine dia asidra amine hita matetika amin'ny ravina dite ary amin'ny habetsaky ny holatra Bay Bolete, hita amin'ny dite maitso sy mainty izy io.
Hita ao anaty endrika pilina na takelaka any amin'ny fivarotam-panafody maro koa izy io. Betsaka ny olona mandray ny L-theanine hanampiana amin'ny fanalefahana ny adin-tsaina sy ny fialan-tsasatra.
Hitan'ny mpikaroka fa ny L-theanine dia nampihena ny fanahiana ary nanatsara ny soritr'aretina.
Ny L-theanine dia mety hanampy amin'ny fampitomboana ny fifantohana sy ny fifantohana. Ny fandinihana tamin'ny taona 2013 dia nahatsikaritra fa ny ambaratonga L-theanine sy kafeinina (eo amin'ny 97 mg sy 40 mg) dia nanampy vondron'olon-dehibe mba hifantoka tsara kokoa mandritra ny asa takiana.
Ireo mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia nahatsapa ihany koa fa mailo kokoa ary tsy reraka amin'ny ankapobeny. Raha ny fanadihadiana iray hafa dia afaka mahatsapa ireo vokatra ireo afaka 30 minitra monja.
Ny fikarohana sasany dia milaza fa ny L-theanine dia mety hanatsara ny fiasan'ny hery fiarovan'ny vatana. Ny fandinihana iray navoaka tao amin'ny diary Beverages dia nahatsikaritra fa ny L-theanine dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny trangan'aretina taovam-pisefoana ambony.
Ny fandinihana iray hafa dia nahita fa ny L-theanine dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fivontosana ao amin'ny tsinay. Na izany aza, mila fikarohana bebe kokoa ianao hanamafisana sy hanitarana ireo fikarohana ireo.
Ny L-theanine dia mety mahasoa ho an'ireo izay mahatsapa ny fiakaran'ny tosi-dra amin'ny toe-javatra mampiady saina. Ny fandinihana tamin'ny taona 2012 dia nandinika ireo olona izay niaina tosidra ambony taorian'ny asa ara-tsaina sasany. Hitan'izy ireo fa ny L-theanine dia nanampy tamin'ny fifehezana io fiakaran'ny tosi-dra io. Tao anatin'io fanadihadiana io ihany, nanamarika ny mpikaroka fa ny kafeinina dia nisy vokany mitovy nefa tsy dia mahasoa firy.
Ny L-theanine dia mety hanampy ny zazalahy voan'ny aretin-tsaina tsy ampy saina (ADHD) matory tsara kokoa. Ny fandinihana tamin'ny 2011 dia nijery ny vokatry ny L-theanine tamin'ireo zazalahy 98 taona 8 ka hatramin'ny 12. Nisy vondrona iray nomena takelaka L 100 isa azo tsakotsakoina L -theanine indroa isan'andro. Ny vondrona hafa dia nahazo pilina plasebo.
Rehefa afaka enina herinandro dia hita fa nanana torimaso naharitra kokoa sy matory kokoa ilay vondrona nitondra L-theanine. Na dia manome toky aza ny valiny dia ilaina ny fikarohana bebe kokoa alohan'ny hamoahana azy ho azo antoka sy mandaitra, indrindra ho an'ny ankizy.
Teo aloha: Hordenine hydrochloride